Ugu Weyn Ee Alenka
Tamaandho loogu talagalay gobolka Moscow: sharaxaada noocyada ugu fiican
Waxaa jira tiro dalag oo miraha ah, ama halkii, noocyo, habka koritaanka kaas oo aan waqti aad u badan. Noocyada noocan oo kale ah waxay ka jiraan tamaandhada. Waxaa intaa dheer, waxaa jira noocyo ay ku noolaan karaan xaaladaha cimilada ee gobolka Moscow. Waa kuwee? Gobollada Moosko, waxaa jira xeerar dhowr ah oo ka caawin kara dhirta iyo kobcinta noocyo ku haboon yaanyada: Saplings waxay u baahan yihiin in ay u boodaan si aan macquul ahayn Ka saar dhammaan gawaarida. Mar kasta oo ay roobabku dhammaadaan, duurka waxay u baahan yihiin in lagu daaweeyo fungicides fyicoforosis. biyaha, jiido dushooda, ka saar miraha aan hoos u dhicin.
Ugu sareeya 6 noocyada dabacasaha ugu fiican
Dhaqanka cagaarshow wuxuu ahaa mid aad u dheer ka hor - ilaa 4 kun oo sano ka hor. Maanta waa dal dalagga sida rootiga ah ayaa noqday mid caadi u ah. Laakiin marka dadku si dhab ah u qadariyaan karootada dhadhanka iyo waxtarka. Qarsoodigu ma aha xaqiiqda ah in saxarka this ee xididdo mar hore oo ka mid ah ka kooban yahay tiro aad u badan ee beta-carotene, taas oo saameyn ku yeelan tayada aragga.
Eggplants ee gobolka Moscow: noocyada ugu wanaagsan iyo sharaxaad
Eggplants waa adag tahay in aan jeclaado, laakiin iyaga sii kordhaya waxay noqon kartaa mid aad u adag. Gaar ahaan, haddii xaaladaha cimiladu aanay u oggolaanin. Laakiin isagu waa nin lagu doodo dabeecadda laftiisa oo la yimaado noocyo isku dhafan ee eggplants, xitaa koritaanka gobolka Moscow. Isla mar ahaantaana, maanta waxaa jira tiro badan oo noocyo noocaas ah, iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah ay ku faani karaan alaabahooda gaarka ah, dhalid ama sifooyin kale, samaynta mid ka mid ah iyaga oo aad u adag.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Alenka 2019